BBC-da oo shaqaale cusub qoratay | Wardoon
Home Somali News BBC-da oo shaqaale cusub qoratay
Laanta Afka soomaaliga ee BBC-da oo dhawaan shaqadeeda inta ugu badan loo soo wareejinayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa shaqadii ka tagaya wariyayaashii waa weynaa ee inta badan ka hawl gali jiray magalada London, taa badalkeedana waxay mudooyinkii u danbeeyay qaadanaysay wariyayaal aad u da yar oo badalaya ku waa hore waxase u danbeeyay shantan.
Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil, waxa uu ku dhashay Gobolka togdheer, gaar ahaan magaalada Burco ee Somaliland.
Kawsar Maxamed waxay ku dhalatay waxna ku baratay magaalada Wajeer ee waqooyi beri Kenya.
Faadumo Yusuf Siciid (Taxadar) waxay ku dhalatay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxayna ku soo barbaartay degmada Xingalool ee Gobolka Sanaag Somaliland inkastoo kasoo shaqeysay idaacado ku yaala maamul goboleedka puntland, agaasimana ka soo noqotay idaacad ku taalla Puntland.
Fartuun Ismaaciil Axmad, waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho.
Previous articleMaxaa ka dhalan kara xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya?
Next articleDAAWO:- Gar-libaax Kooxda Aranjaan ayaa qabsatay Puntland
Inkabadan lix kun oo Tigree ah ayaa u qaxay Suudaan